Brachioradialis imisipha: umsebenzi. Kanjani ukwakha?
Abesilisa abahileleka ukuqina sawo esiningi, unake kakhulu izandla ukuhlola. Njengoba umthetho, Igxila biceps futhi triceps, futhi ibhodi lemisindo dengwane njengoba semukela ezinye umthwalo uma lenza cishe kunoma iyiphi umsebenzi owenziwayo. imisipha ehlombe Big - kuhle, kodwa ukuthi izandla ezakhiwa ngokugcwele futhi wabheka nidinga ngempela eceleni ukutadisha ibhodi lemisindo. Brachioradialis kwemisipha - imisipha elikhulu kunawo wonke ibhodi lemisindo. Mayelana ukuqeqeshwa kwakhe namuhla futhi kuzoxoxwa.
igama Okwesibili brachioradialis imisipha - brachioradialis. umsebenzi mayelana nokwakheka kwayo - eguqa izingalo endololwaneni. Imisipha esisogwini ingaphandle ibhodi lemisindo futhi unamathele onqenqemeni elingaphandle humerus.
Athuthukisiwe brachioradialis imisipha inamathela izingalo lokugijima ukubukeka eyindoda, kodwa lokhu akuyona into ebaluleke kunazo zonke. Nge reaming njalo imisipha ezikhulayo amakhono biceps, okuyinto nakanjani ibhonasi ewusizo. Ngakho uqeqesha lokhu imisipha kancane Kuyazuzisa ngempela ke.
Brachioradialis imisipha: indlela yokwakha
Ngoba ukuqeqesha kwemisipha ibhodi lemisindo futhi brachioradialis ngokukhethekile, dumbbells esetshenziswa, ibha, ibha ovundlile, noma imishini ekhethekile umsebenzi. Ngezinye izikhathi asebenzisa imishini yokukhulisa ezemidlalo ezifana carpal olwandisa ezinamasondo okwesikhathi esihlakaleni. Kukhona futhi izindlela engaqondile imisipha cwaningo brachioradialis. Lezi zihlanganisa lwezemidlalo owayephethe namasongo, ukusebenza esikhwameni isibhakela endaweni amagilavu abadliwa futhi ukweqa intambo ezinesisindo. Ngakho-ke, noma ubani ofuna ukuba asebenze brachioradialis, kulula ukwenza, ngisho ekhaya.
Brachioradialis imisipha: indlela ekhiphela up dumbbells
Kulokhu, kuhambisana kahle isando curls. Benza ulula. Ukuqala isikhundla - emi noma ukuhlala ebhentshini nge dumbbells ezandleni zakhe. Emuva iqonde, izingalo iqonde, izintende babheka endikimbeni. Hand nge dumbbell sifana isando, yilapho kwavela igama umsebenzi. Bekanye okhishwa ngamakhala is evula abuye avale izikhali emahlombe (kanyekanye noma ngokulandelana). Swing akuyona zinkulu. Isisindo dumbbell kumele akhethwe ukuze ukugoba yeshumi inikezwe kanzima.
Omunye umsebenzi elikuvumela ukuqeqesha brachioradialis yakho usebenzisa dumbbells - eguqa Zottmana. Ukuqala isikhundla kuyafana ekusebenziseni odlule. Kuyadingeka ukuze agobe izingalo. Umahluko owokuthi ukuthi ngesikhathi izingalo ukusonga uphendukisa izandla emzimbeni, kuyilapho ngesikhathi yehla - izintende phansi. Ngenxa yalokho, zisebenze biceps, futhi inhlangano yesibili esigabeni sokuqala - brachioradialis kwemisipha. Le nhlangano yenkolo yokulwela kufanele kwenziwe kancane futhi ngokushelela, ikakhulukazi esigabeni sesibili.
Isifundo brachioradialis ngosizo bar
Rod futhi kwenza kube nokwenzeka ukuba zifezeke imisipha brachioradialis. Ngenxa yalezi zinjongo ukulingana curls kuheleza engenhla.
Ukuqala isikhundla - emi, izinyawo ehlombe nobubanzi ngaphandle. I projectile esithathwayo phezulu isango ububanzi isilinganiso. Inspiratory kudingeke uphakamise ibha esifubeni ngosizo curls. On the exhale, wehlise ibha ngaphansi kolawulo, uzama ukuzizwa umsebenzi imisipha. Eqinisweni kuba ezinyakazayo efanayo eyayikhona yesibili isigaba flexion Zottmana.
Donsa ukuze brachioradialis kwemisipha
mhlawumbe Lokhu kuyindlela elula ukufunda lokhu imisipha njengoba oluvundlile ungaphakathi cishe njalo egcekeni. Musa ukunganakwa umsebenzi kubha, ngoba lokhu igobolondo elula ukusebenza isisindo ayo ikuvumela ukumpompa cishe wonke umzimba. By endleleni, abantu abaningi ibha ovundlile, kulapho abathintekayo ibhodi lemisindo, njengoba kunjalo, phakathi kwezinye izinto, futhi unesibopho kuheleza amandla.
Brachioradialis ukusebenza kubha kuzovumela ngisho choma elula. Uyakuqonda phezulu ovundlile ibha ukubamba ngaso ububanzi ehlombe uzame ezazilengisiwe sathi ngoba lemali isikhathi. Futhi unomuzwa wokuthi kuyinto umsebenzi we ibhodi lemisindo.
Yiqiniso, indlela eyanele ukuqeqeshwa ku bar ovundlile, okuyinto ngaphezu ibhodi lemisindo, futhi ixhumanisa biceps futhi emuva - buyaqhubeka. Uma ufuna ukuthuthukisa brachioradialis kwemisipha - khetha ukudonsa isango ngqo emincane.
Faka uhlelo ukuqeqeshwa
Ngakho ukuthi imisipha ukuthuthukisa ngokuvumelanayo futhi okusele, kudingeka zixazululwe nguhlelo ecacile. Njengoba kuyinto, biceps futhi triceps, bheka, yonke imisipha abamelene ezaziwayo, wasebenza ngezinsuku ezahlukene. Brachioradialis imisipha isebenza nge biceps, ngakho kudingeka aqeqeshwe ngosuku. Khona-ke ngosuku olulandelayo imisipha sokusukuma futhi futhi balungele msebenzi.
Zingenzeki ngosuku olulodwa uyisele le biceps, kanye nezinye - brachioradialis. Lokhu kuyoholela ekuthuleni ukukhathala okungamahlalakhona we ibhodi lemisindo. Ngemva kosuku lokuqala, izothola umthwalo ngokungaqondile, kanti eyesibili - oqondile. Njengoba imisipha ibhodi lemisindo usukhathele ngokushesha imisipha ehlombe, kufanele ushiye ekupheleni Amazing.
Kuthiwani uma kubuhlungu?
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ukuqaqamba brachioradialis kwemisipha. is it iphathwa kanjani? Lona umbuzo ovamile phakathi Wabasaqalayo. Njengoba sekushiwo, lokhu ubuhlungu bemisipha e iningi amacala zibangelwa okungalungile-up umsebenzi. Ngo ngezicubu zomzimba, aqoqana semali acidosis acid, futhi "asemikhumbini" at umthwalo lokuqala. Isixazululo ilula - udinga ukunikeza imisipha yakho ezinsukwini ezimbalwa lokuphumula. Phakathi nalesi sikhathi lo msubathi kuyodingeka isikhathi nje uhlaziye isimiso sakho ukuqeqeshwa.
Ukuze umphumela obengeziwe, ungakwazi ugcobe iyiphi wamafutha kwemisipha kusukela nemihuzuko. Uma ungenalo asize - kubalulekile ukubona udokotela, ungase ube enyelisa kwemisipha.
Dmitry Klimov: "Ukwakhiwa komzimba - lokho ukuphila"
Anna Starodubtseva: Biography, isithombe, ukuphakama, isisindo
Tom Platz - sawo esiningi legend
Ukusebenzisa ashisayo okhiye-Chrome
Zilim - umfula ekhatsi Bashkortostan: incazelo, i-kayaking ukushaywa
Indlela yokuba yisibonelo: amathiphu wabaqalayo
Ukubuyekeza: ifilimu "The Reader". Abalingisi kanye izindima ngesakhiwo
Qondisa: indlela ukusetha Amadolobha imfashini: Skylines
Izikhangibavakashi Zaraysk: isithombe, ukubuyekezwa
Kunini lapho engcono ukuthenga imoto entsha? Ukuthenga imoto salon lapho oholela kangcono futhi ashibhile?
Kuyini ginger wusizo amadoda: tikuhlakanipha